Safarada Ra’iisul Wasaare Kheyre ee Dowlad Doboleedyada dalka, bilow dhamaadka Farmajo-Kheyre miyaa? – GEELLE MAG
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa muddo 10 cisho ah safaro shaqo ku maray Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Inta uu ku guda jiray safaradiisa Shaqo Xasan Cali Kheyre ee uu ku marayey Maamul Goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu Maamul Goboleed walba ka dhagax dhigay mashaariic horumarineed.
Dadkii soo dhoweeynayey Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa u muujiyey siday ugu faraxsanaayeen imaatankiisa, iyagoona uga mahadceliyey dadaalkii waqtiga dheeraa ee uu geliyey dhismaha Galmudug loo dhan yahay oo dhameystiran, waxayna hal ku dhig uga dhigeen boorar ay ku xardhanaayeen “Mideeye”.
Soo dhoweyntii loogu sameeyey Kheyre maamulka Koonfur Galbeed. Raisal Wasaaraha waxa soo dhoweyey boqolal qof isaga oo ay dhinac socdaan Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobaladaas.
Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa tababar ugu soo xeray Magaalada Dhuusamareeb Saraakiil Ciidan oo ka tirsan guutada 15-aad qeybta 21-aad ee Ciidanka Xoogga Soomaaliyeed, Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa koormeeray goobaha ay Magaalada Dhuusamareeb kaga sugnaayeen Ciidamada Booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haram cad ee ka qeybta ahaa Sugidda Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug ee Xaruntiisa tahay Dhuusamareeb iyo Xarunta lagu qabanayey Shir Weynaha dib u heshiisiinta Galmudug.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ah mid u muuqday mid ku jiro wax u eg ololaha doorashada sanadka 2021-ka. Arrintan ayeyna dad badan oo ka tirsan Mucaaradka aaminsan yihiin. Waxaana ka mid ah dadkaas Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo horay u sheegay in dowladda dhexe ay ay wado ololaha doorashada soo socota, wuxuuna yiri:
“2020-ka nin uu ilaahey calaf ugu daray baa kusoo noqonayee aan dariiqa dastuurka u marno, waxaan ka wada hadalnay midaas bay aheyd, taasaa keentay in maamuladii kulli maanta loo burburiyo, oo la yiraah mid walbe haye, maanta Koonfur Galbeed halkaasaa, Galmudug waa taas ay ku wadaan 10 beri iyo 15 beri Galmudug iskugu soo celinayaan oo ay dowlad ugu dhisayaan, iyadoo tii u dhisneed ay burburinayaan,” ayuu sheegay Mudane Madoobe.
Kulankii soo afmeeridda coolada Xeerale iyo Hurshe.
Lakiin waxa hubaal in badan wakhtigiisa uu ku qaatay Galmudug dhexdhexaadinta beelaha dega degaanka iyo so afjarista colaadaha ka jira deegaanka. Waxa uu ku guuleystay in uu heshiis kala dhex dhigo laba beelood oo ka tirsanaa Bulshada Xeraale iyo Huurshe oo muddo seddax sano ah ay colaad ka dhaxeysay, Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa wuxuu ku tilmaamay heshiiskaan ay wada qaateen labada beelood mid taariikhi ah mudana in looga daydo labada beelood heshiiskan taariikiga ah ay gaareen.
“Howshaan caawa halkan ka dhaceysa waa howl aad muhiim ugu ah Dawladda oo dhan laga soo bilaabo madaxweynaha illaa xubnaha kala duwan ee dowladda. Caawa heshiiska halkan ka dhacay dhibkii aan ka heshiinay hadii aan dib ugu noqono, colaad kaliftay wiil iyo aabahiis, laba isla dhalatay, laba ilmo adeera ah, dhalinyaro iyo waayeel meel ku wada koray in ay is salaami waayaan ama ay isku imaan waayaan maka turjumeyso kaliya xeraale,” ayuu ka heeshay goobta heshiisku ka dhacay.
Dadka Siyaasada falanqeeya ayaa sheegay in Raisal Wasaare Kheyre uu doonayo inuu xilka ka badalo Madaxweyanaha dalka Farmajo oo ay aad isugu dhowyihiin. Labada masuul ayaa isku mowqif ah illaa iyo haddana suurta gal ka dhigay in ay meesha ka saaraan khilaafaadka ka dhex dhalan jiray madaxda wadanka.
Waxa ay aad ugu howlanaayeen dhisidda maamulka Galmudug. Kheyre wuxuu tilmaaday muhiimada ay leedahay dhisida dowldanimadu iyo doorka ay leedahay dhismaja mamulada ya ka midtahay Galmudug.
“Waa ilaahii mahadiis in caawa aan halkan isugu nimaano, inagoo ku dhaw Kun qof oo ku sugan Magaala Madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb, kana wada shaqeyneyna sidii loo dhameystiri lahaa geedi socodka dib u dhiska Galmudug”.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa wuxuu gaaray Magaalada Caabudwaaq, wuxuuna dhagax dhigay dhismaha qeybo lagu kordhinayey Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed faraceeda Caabudwaaq.
Intaas kadib, Xasan Cali Kheyre ayaa booqasho ku tagay deegaano ka tirsan Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida Baydhabo, Xudur iyo Marko, halkaas oo uu ka fuliyey mashaariic hormarineed. Dhanka Magaalada Baydhabo ee Gobolka Bay wuxuu dhagax dhigay dhismaha wado laf dhabar u ah isku socodka Magaalada Baydhabo, wuxuu xariga ka jaray ceel biyood ay ka biyo cabi karaan ku dhawaad 4,000 oo qoys, Sidoo kale wuxuu 150kun oo doolar ugu deeqay dhismaha Garoonka Kubadda Cagta Dr. Ayuub ee Magaalada Baydhabo.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre waxaa uu safarkiisa kusoo afmeeray Magaalada Marka ee Gobolka Shabeelaha Hoose, isagoo ku amaanay bulshada ku nool Magaalada Marka dhaqan-gelinta dib u heshiisiinta ay higelisay, midnimada iyo dowladnimada intaba.
Laakiin su’aalo badan ayaa wali la is weydiinayaa. Safarada uu Ra’iisul Wasaare Kheyre uu ku maray Maamul Goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya, dadka qaar ee bulshada waxa ay leeyihiin ujeedada ka dambeysa safarda Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya inuu yahay horumarinta Maamul Goboleedyada Dalka iyo u kuurgelidda hey’adaha ka jira Dowlad Goboleedyada dalka ka jira si hanaanka federalism-ka loo hirgeliyo, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin ujeedada Safarada Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre inuu yahay olole doorasho, isla markaana uu Ra’iisul Wasaaruhu uu bilaabay ololaha doorashada 2020-ka.
Madaxweyne ku Xigeenka Jubbaland ”Jubbaland horay ayay u socotay”